အလုပ်ခွင်အတွင်းမှ လူမသိ ၊ သူမသိ ဆုံးရှုံးမှုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အလုပ်ခွင်အတွင်းမှ လူမသိ ၊ သူမသိ ဆုံးရှုံးမှုများ
အလုပ်ခွင်အတွင်းမှ လူမသိ ၊ သူမသိ ဆုံးရှုံးမှုများ
Posted by etone on Jul 28, 2012 in Community & Society, Critic, Society & Lifestyle | 24 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း အလုပ်ခွင်တွင်းမှ မြင်မိသမျှ
ကာလအတန်ကြာ မြင်တွေ့ ကြားသိကာ ကြုံနေရပေမယ့် ၊ ယခုထက်တိုင် ထူးခြား တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသော အလုပ်သမားဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင်က အကြောင်းရာ အချို့ကို တို့ဆိတ်ပြပါဦးမည်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က သူများ လခစား အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် ၊ ဒီပို့စ်လေးကို အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဧ။် အမြင်ဘက်မှရော ၊ ဘ၀တူ အလုပ်သမားတွေအား စာနာစိတ်ဖြင့်ရော ရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ဝေဖန်မှုပြုရလောက်အောင် မရင့်ကျက်ပါ သို့သော် မျက်စိတထောက်စာအရ မြင်သမျှရေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်မတို့တွေ ဘ၀ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့အတွက် အလုပ်ကိုယ်စီ လုပ်ကြရသည် ။ မိမိဧ။် ပညာအရည်ချင်း ၊ ရွေးချယ်မှု့ ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းဝိုင်း ထောက်ပံ့ပေးမှု ၊ မိမိတို့ဧ။် ရွေးချယ်မှုပေါ် မူတည်ပြီး အလုပ်ခွင် ၊ အလုပ်နေရာ ၊ ရာထူး ၊ လစာ ၊ ခံစားခွင့် စသည်တို့ ကွာခြားသွားသည် ။ မည်သည့်အလုပ်ခွင်ဖြစ်ပါစေ အလုပ်ခွင်တွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သည် ။ ဒါ့ပြင် အလုပ်သမားတို့ဧ။် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးသော အခန်း ကဏ္ဍတရပ်ဖြစ်သည် ။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများဧ။် အလုပ်ခွင်များထဲတွင် အလုပ်သမား များစွာစုပေါင်းကာ အလုပ်လုပ်ကြရသည် ထို့ကြောင့် တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အလုပ်ခွင် ဖန်တီးပေးထားမှု ရှိမရှိသည်လည်း အရေးကြီသည့်အပြင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုသည်လည်း အရေးပါသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည် ။
ပထမဦးဆုံး အလုပ်ခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ပတ်သတ်လို့ အနည်းငယ်မျှ မိမိဧ။် အမြင်ဖြင့် ဆွေးနွေးချင်ပါသည် ။ safety first ဟု ချိတ်ဆွဲထားရုံဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသော အလုပ်ခွင်ဖြစ်မလာပါ ။ ထုတ်လုပ်မှုများသည် လူအားဖြင့်ရော ၊ စက်အားဖြင့်ပါ လည်ပတ်ရသည် ထိုအခါ စက်ချို့ယွင်းမျိုး ၊ မတော်တဆ လွင်စင်ထိမှန်မှုမျိုးလိုမျိုးတွေကြောင့် အလုပ်သမားကို အသေးစား ဒဏ်ရာမှ ၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဒဏ်ရာအထိအကျိုးသက်ရောက်စေသည် ။ ထို့ကြောင့် အလုပ်ခွင်တိုင်းတွင် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် အထောက်ကူပြု ပစ္စည်းမျိုး ကြားခံ သုံးစွဲစေသင့်သည် ။ ဦးထုပ် ၊ လက်အိတ် ၊ မျက်မှန် ၊ နှာခေါင်းစည်း စတာတေပြင် လုပ်ငန်းသုံးအထောက်ကူးပြု ကြားခံပစ္စည်းအနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ပေးသုံးသင့်ပါသည် ။ ယခုလက်ရှိ လည်ပတ်နေသော စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံ တစ်ချို့သည် ၄င်းတို့ဧ။် အကျိုးမြတ်ကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေပြီး ၊ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှု အားနည်းနေသေးကြောင်းတွေ့ ရ သည် ။
တကိုယ်ရေ သန့် ရှင်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းသောအလုပ်ခွင်ဖန်တီးပေးရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလျှင်တော့ သောက်သုံးရေ ထားရှိပေးမှု ၊ ထမင်းစားနေရာသတ်မှတ်ပေးမှု၊ အလုပ်လုပ်ရာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး၊အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေး ပိုးမွှားကင်းစင်ရေး အနံ့ သက်ကင်းစင်ရေး စတာတွေ မပါမဖြစ် အလေးပေးလုပ်ဆောင်ရပါမည် ။ သောက်သုံးရေ ထားရှိပေးရေးဖြင့် ပတ်သတ်လို့ ၊ အချို့သောစက်ရုံများသည် နေရာဒေသကိုလိုက်ကာ သောက်သုံးရေထဲတွင် ပါဝင်နေသော ဒြပ်စင်များ ပါဝင်နေမှုခြင်း မတူသဖြင့် ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ကာ သောက်သုံးရန်သင့်မသင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရသည် ။ မိမိတို့နှင့်သင့်တော်ရာ ရေသန့်စင်စက်များ ၀ယ်ယူပြီး စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားများ သောက်သုံးရေအတွက် ပံ့ပိုးပေးရသည် ။ သို့သော်အချို့သော စက်ရုံများသည် ထိုအချက်များကို မလုပ်ဆောင်ပဲ အ၀ီစိတွင်းမှရေကိုသာ ပိုက်လိုင်းမျာဖြင့် ဆက်စပ်ပြီး ရေစစ်ဖြင့် ခံယူကာ သောက်သုံးရေ ဖန်တီးပေးကြသော အနေထားမျိုးလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ။ မိမိတို့သောက်သုံးနေသော ရေဧ။် သန့်ရှင်းမှုကို ကျွန်မအပါဝင် စက်ရုံအလုပ်ရုံမှ အလုပ်သမားအားလုံးနီးပါး မျက်စိဖြင့်သာ အလွယ်စစ်ဆေးကြပါသည် ။ မိမိဧ။် သောက်သုံးရေထဲ အနည်ပါဝင်မှု မရှိ ၊ အနံ့ အရသာ ကင်းလျှင် သန့်စင်သည်ဟုယူဆကာ သောက်သုံးကြသူက များသည် ။ မည်သည့် အလုပ်သမားကမှ ရေနမူနာယူကာ မိမိပိုင်ငွေဖြင့် သန့်ရှင်းမှုအတွက် သုတေသနပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ ထမင်းစားနေရာသတ်မှတ်ပေးမှုသည်လည်း သာမန်အားဖြင့် အလုပ်ရုံစက်ရုံအများစုတွင် အလုပ်ခွင်ဧ။် သီးခြားပြင်ပနေရာတွင် ရှိနေသည်က များသည် ။ ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်နှင့် စွန့်ပစ်အကြွင်းကျန်များကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ပင် ။ထမင်းစားနေရာ သတ်မှတ်ပေးမှုတွင်လည်း ၊ စားပွဲခုံ ၊ ထိုင်ခုံ ၊ အမိုးကာ အောက်တွင် ရှိနေမည်မျှပင် မလုံလောက်သေး ၊ စားပွဲတို့ဧ။် သန့် ရှင်းမှု ၊ခိုင်မာမှု တို့သည်လည်း အရေးပါနေပြန်သည် ။ အချို့သော စက်ရုံရှိ ထမင်းစားဆောင်များတွင် နေ့လည် နေ့ခင်း လူသူကင်းမဲ့ချိန်တွင် ၊ အချောင်ခိုအလုပ်သမားများ ကျောခင်း ခြေခင်း ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ကြောင်ခွေး စသည့်တိရိစ္ဆာန်များ တက်ရောက်တတ်ခြင်းကြောင့် ၊ ထမင်းစားဆောင်/နေရာကို သန့် ရှင်းရေးအား ညွှန်ကြားက သန့် ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးလုပ်ပေးရန်လည်း လိုအပ်သည် ။ မိုးတွင်းဖြစ်သည်နှင် ခြင်ယင်များလည်း ပေါများတတ်ရာ ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်များကိုလည်း စနစ်တကျ စွန့်ပစ်စေရန် အဖုံးပါအမှိုက်ပုံးများ သတ်မှတ်ထားရှိပေးရမည် ။ အလုပ်ခွင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သတ်လို့လည်း စက်ရုံပိုင်းမှ သန့်ရှင်းရေးများ အပိုင်းခွဲချမှတ်ကာ မခိုကပ်ပဲ လုပ်ဆောင်စေသင့်သည် ။အလုပ်ခွင် သန့်ရှင်းရေးဟုဆိုရာတွင်လည်း အမှိုက် ပိုးမွှားကင်းစင်ရုံမျှမကပဲ ၊အနံ့ သက်ကင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တည်စေရန် ပံ့ပိုးပေးသည့်အနေထားမျိုးကို ဆိုလိုသည်သည် ။ ခြင်၊ယင်ပေါက်ဖွားနိုင်သည့်နေရာများကိုလည်း ဆေးဖြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်သလို ၊ မြက်တောနှင့် နီးစပ်သော နေရာများတွင်လည်းထုံးဖြူးပေးခြင်းမျိုးစသည်တို့ကို ဆိုလိုပါသည် ။ အချို့သော အ လုပ်ရုံများဧ။် အခန်းများသည် အလွန်မှောင်ရုံမျှ မကပဲ ၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစွာမရသော ၊ မြေစိုနံ့များနှင့် ထုံမူးနေသော အနေထားမျိုးရှိသည်ကို မြင်ခဲ့ဖူးပါသည် ။ အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးအကြောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် အများသုံးအိမ်သာများနှင့် ပရိုက်ဗိတ်အိမ်သာများ ခွဲခြားမှုကို ထောက်ပြပါဦးမည် ။ အများသုံး အိမ်သာဟုဆိုရာမှာ အလုပ်သမားများအတွက် အိမ်သာ ငါးလုံးတွဲ ၊ ခြောက်လုံးတွဲများကို ဆိုလိုပါသည် ။ ထို အိမ်သာများထဲတွင် အချို့သော အိမ်သာများသည် သော့များခတ်ထားကြသည် ။ အကြောင်းမှာ အလုပ်ရုံမှုး၊ စူပါဗိုက်ဆာ၊၀န်ထမ်းရေးရာ စသော အလုပ်သမားခေါင်းများအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ရည်ရွယ်သောကြောင့်ပင် ။ အဘယ့်ကြောင့် ဧ။်သို့ သော့ခတ်ရပါသည်ဟု မေးလျှင် ၊ အများနည်းတူ အိမ်သာ သွားရမှာ ညစ်ပတ်သောကြောင့်ဟူသောအဖြေမျိုးပေးမည်သာထင်သည် ။ အိမ်သာတို့ဧ။် သန့် ရှင်းရေးကို သန့် ရှင်းရေး ၀န်ထမ်းမှ ပျက်ကွက်မှုမရှိပဲ စစ်ဆေးလုပ်ဆောင်နေလျှင် ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျသာ သိမ်းစည်းလျှင် ၊ အတော်သင့်တော့ သန့်ပြန့်သော အိမ်သာမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား ။ အလုပ်သမားချင်းအတူတူ ၊ လစာ အနည်းငယ်နဲ့ ရာထူး အနည်းငယ်ကွာရုံမျှဖြင့် အများပိုင်အိမ်သာ သော့ခတ်သုံးသည့်အဖြစ်သည် အလုပ်သမားများ ကြား ဘူဘူချင်း တစ်လုပ်သော လုပ်ရပ်ဟု မြင်မိပါသည် ။ အများသုံးအိမ်သာများဧ။် သန့်ရှင်းရေးသည် သန့်ရှင်းရေး ၀န်ထမ်းပေါ်တွင်သာမက ၊ သုံးစွဲသူ အလုပ်သမားများပေါ်တွင်လည်း မူတည်နေသေးသည် ။ သုံးစွဲသူတို့တွင် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတမျိုးပေးနိုင်မှုသည်လည်း တဖက်တလမ်းက လိုအပ်ပြန်သေးသည် ။ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ဆက်ဆံရေးများစွာကွာခြားသဖြင့် … ဗဟုသုတပေးခြင်းမျိုးဖြင့် အလုပ်သမားတို့ဧ။် ခေါင်းထဲ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အသိထည့်ပေးသင့်ပါသည် ။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အနေဖြင့်အားလည်း ထောက်ပြ ဝေဖန်စရာ များစွာ ရှိပါသည် ။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် အနည်းဆုံး လူငါးရာနှင့် အထက်ရှိလျှင် ဆေးခန်းထားပေးရမည် ။ အစိုးရ အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ သူနာပြုတစ်ယောက်ထားပေးကာ ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးရမည် ။ လူတစ်ထောင်နှင့် အထက်ရှိပါက ဆေးခန်းတစ်ခု ၊ အစိုးရ အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ သူနာပြုတစ်ယောက်အပြင် အချိန်ပိုင်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ ထားရှိပေးရမည်ဟု ချမှတ်ထားသော်လည်း ၊ စက်ရုံ အများစုသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပိုင်းတွင် အားနည်းနေကြသည် ။ လူငါးရာ နှင့် အထက် ရှိသော အချို့စက်ရုံများတွင် ဆေးခန်းနှင့် သူနာပြုထားပေးသော်လည်း ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးမည့်သူမှာ သူနာပြုဝတ်စုံဝတ်ထားသော်လည်း ၊ သာမန် အရပ်သူဖြစ်နေခြင်း ၊ အစိုးရအသိမှတ်ပြု လက်မှတ်မရပဲ သူနာပြု အမည်ခံနေခြင်း စသဖြင့် ၊ ငွေသက်သာရာ၊ နီးစပ်ရာအလုပ်ခန့်အပ်ထားသူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည် ။ အစိုးရ အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်မရှိသည်က လည်းကောင်း ၊ သူနာပြု အစစ်မဟုတ်သဖြင့် အတွေ့ ကြုံမရှိသည်ကလည်းကောင်း ၊ အခြေနေ အရပ်ရပ်တို့ကြောင့် ၊ နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးရမည့် အခြေနေနှင့် ကြုံလာလျှင် ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်ကာ လွဲမှားသော ကုသမှုပြုလုပ်ခြင်းများ ၊ ဆေးပေးမှားခြင်း ၊အော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းခြင်းများ ၊ အပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းများဖြင့် အလုပ်သမားတို့ကို သူနာပြုအစစ်ကဲ့သို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် ပြုစုမှု မရှိကြောင်းသိရသောအခါ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည် ။ စက်ရုံ အလုပ်ရုံအလုပ်သမားများသည် မနက်ခုနှစ်နာရီခွဲမှ ညနေ ရှစ်နာရီအထိလည်းကောင်း ၊ ကိုးနာရီအထိလည်းကောင်း ၊ ညဆယ့်တစ်နာရီအထိလည်းကောင်း ၊ မနက်၂ နာရီထိလည်းကောင်း လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို အချိန်ပိုဆင်းကာ အလုပ်လုပ်ကြရသည် ။ အိမ်မှာနေသော အချိန်ထက် အလုပ်ခွင်တွင် နေသော အချိန်က ပိုများသည် ။ လူစုလူဝေးနှင့် အလုပ်လုပ်ရသဖြင့် တုပ်ကွေးအပြင် အခြားသောကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေလည်း မြင့်မားသည် ။ ဤသို့သော အခြေနေမျိုးတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သေချာ မပေးနိုင်သူမျိုးကိုထားရှိမည်ဆိုပါက အလုပ်သမားတို့သည်လည်း ကျန်းမာတတ်ကြွစာဖြင့် အလုပ်ကောင်းစွာ လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ ။ ဒါ့ပြင် လူတစ်ထောင်နဲ့ အထက် အချို့သော စက်ရုံများသည် အချိန်ပိုင်း ဆရာဝန်မထားရှိပဲ ၊ သူနာပြုတစ်ယောက်သာ ထားရှိပြီး စရိတ်ချွေတာနေကြသည်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် မြင်သိခဲ့ရပြန်သည် ။ အလုပ်ခွင်တွင်းမတော်တဆမှုများဖြစ်သောအခါ သူနာပြုအတွေ့ကြုံမရှိသဖြင့် ထိရောက်သော ကုသမှုမပေးနိုင်ပဲ အပြင်ဆေးခန်းများဆီသို့ သွားရာက်ကုသရသော အလုပ်သမားများလည်း ရှိသည် ။ ဒါတင်မကသေးပေ အချို့သော စက်ရုံများသည် အချိန်ပိုင်း ဆရာဝန်ထားရှိသော်လည်း ဆမ လက်မှတ်မရရှိသေးသော ကျောင်းပြီးခါစ ဆရာဝန်ပေါက်စများသော်လည်းကောင်း ၊ ကျောင်းတက်နေစဲ ဆရာဝန်လောင်းများကိုလည်းကောင်း ခန့်အပ်ထားကြောင်းလည်း သိရပြန်သည် ။ မိမိဧ။် အလုပ်သမားတို့ကို မည်သို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသော အလုပ်ရှင်တို့ဧ။် စေတနာကို သိသော အခါ များစွာ စက်ဆုပ်မိပါသည် ။
လူမှုဖူလုံရေးကဲ့သို့ အဖွဲ့စည်းမျိုး ရှိသော်လည်း ၊ အလုပ်ချိန်တွင်း ၄င်းတို့ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ရန် မလွယ်ကူသောကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကိုသာ အများဆုံ ထိတွေ့ နေကြရသော်လည်း အချို့သော စက်ရုံများဧ။် စေတနာမမှန်မှုကြောင့် အလုပ်သမားတို့ လူမသိ သူမသိဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆုံးရှုံးနေကြသည် ။
ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့စည်းတို့က စည်းမျဉ်းများကြားတွင် စစ်ဆေးနေခဲ့ကြသော်လည်း ၊ အချို့သော စက်ရုံများတွင် လိမ်နည်းပေါင်းများစွာဖြင့် အထက်ပါ အဖြစ်ပျက်များကို ဖုံးဖိကာ လုပ်ဆောင်နေကြသေးသည် ။ အလုပ်သမား တစ်ယောက်အနေဖြင့်ရော ၊မြင်တွေ့နေ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင် အနေထားအရပါ အပြုသဘောဆောင်ကာ ယေဘုယျထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များ ၊ အလုပ်မှ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားများ ဖတ်မိပါလျှင်လည်း ၊မှားတာရှိလျှင် ၀န္ဒာမိဟု သဘောထားကာ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ကြပါသည် ။
ဒါဆိုရင် ဒီလို အလုပ်သမားတွေရဲ့  အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ သတ်မှတ်ပေးမဲ့ ဥပဒေစည်းကမ်းတစ်ခု လိုအပ်နေပြီထင်ပါတယ်။ ရှိပြီးသားလည်းဖြစ်ပေမဲ့ မပြည့်စုံသေးဘူးထင်ပါတယ်။
နောက် အဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံ မစုံကို စစ်ပေးမဲ့ အဖွဲ့အစည်းကောင်းကောင်းလည်းလိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အတော်အသင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စည်းမျဉ်းလေးတွေချထားပေးတာ အလွန်ကောင်းပါတယ် … ဒါပေမယ့် အချို့သော အလုပ်ရုံစက်ရုံတွေက …. စည်းမျဉ်းကို လက်တလုံးခြားလေးတွေ လုပ်လု့ပ်နေတာ မြင်မိလို့ပါ။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို စစ်ဆေးမှုရှိပေမယ့် ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကြိုတင်အသိပေး စစ်ဆေးတာမျိုးဆိုတော့ စက်ရုံတွေဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာလေးတွေ လုပ်တတ်ကြပြီး အခြေနေမှန် ကို ဖုံးဖိတတ်ကြလို့ပါ ။ အခုဆို အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းဘက်ကို ဦးတည်နေပြီမို့ တချို့နေရာလေးက ဟာကွက်လေးတွေကို မြင်သာစေချင်လို့ လူမုန်းခံရေးပြရခြင်းပါ ။
လုပ် ငန်းခွင် ထဲက အလုပ် သမား၊အလုပ် သမ လေးတွေရဲ့ ပကတိ အခြေနေ ကို ထင်ဟပ် ပေါ် လွင် စေတဲ့ ပိုစ့် လေး ပါပဲ။ အီတုန်းတို့ လို သိနေမြင်နေရတဲ့ သူတွေ က ရေး ပြမှပဲ အပြင်က လူတွေ သိရမှာပါ။ တခါက မင်္ဂလာဒုံ ဘက်က ဘုန်းကြီး ကျောင်း တခု ကို သွား တုန်း က စက်ရုံ ၀င်း ကြီး တခု ထဲမှာ နေ့ လည်ထမင်း စား ချိန် ကို ကျိုးတို့ ကျဲတဲ သစ်ပင် အောက်တွေမှာ မိန်း ကလေးတွေ ကိုယ့် အစုနဲ့ ကိုယ် ငုတ်တုတ် လေးတွေ ထိုင်ပြီးထမင်း စားနေ ကြ တာတွေ့ ခဲ့ ရလို့ စိတ် မကောင်းတောင်ဖြစ် ခဲ့ရဖူးတယ်။
ဒါတွေဟာလည်း အလုပ် သမား အခွင့် အရေး ကို အပြည့်အ၀ မရ တာ ပဲ။ သက်ဆိုင် သူတွေ ဖတ်မိ စေ ဖို့ ဒီ ပိုစ့် လေး က အုတ်တချပ် ဖြစ် စေ ကောင်း ပါရဲ့။
အစ်မမိုချိုရေ …. ဟုတ်ပါတယ် .. အချို့သော စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေမှာ ထမင်းစားဆောင် ပေးထားပေမယ့် လူဦးရေနဲ့ စီစဉ်ထားတဲ့နေရာက မမျှတပါဘူး … ဒါကြောင့် အပြင်မှာ ထွက်ပြီး စက္ကူခင်းစားကြရသူတွေလည်းရှိ ၊ သစ်ပင်ခြေရင်း ထိုင်စားရသူတွေလည်းရှိတာပါ ။ ညီမတို့ စက်ရုံမှာတောင် အရင်က အဲ့ဒီလို အနေထားဖြစ်လို့ သူဌေးက မြန်မာနိုင်ငံ ခဏလာလည်ရင်း မြင်မိသွားတဲ့အခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်လေရဲ့ ချက်ချင်းပဲ ….ပလပ်စတစ်စားပွဲဝိုင်းလေးတွေအများကြီးဝယ်ပေးပြီး စားခိုင်းတော့တယ် …. ။
အခုလည်း ဒီလိုပါပဲ … မမြင်လို့ ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တာလေးတွေအတွက် …. မြင်မိစေရန်ရေးလိုက်ခြင်းမျိုးပါ … ။ တာဝန်ရှိသူတွေ မြင်မိလောက်ပါစေ ။
Good Post & Good Idea.
လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင်.ရှောက်မှု.၊ အလုပ်ချိန် စတဲ. အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင်.တွေအားလုံးဟာ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ. အသိဥာဏ်၊ ကိုယ်.အလုပ်သမားတွေ အပေါ် ထားတဲ. စေတနာပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ်၊
စစ်ဆေးတဲ. အဖွဲ.အစည်းကလဲ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ။
ကိုခင်ရေ ….. ပို့စ်လာဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …. ။
Ster ပြောသလိုပါပဲ …….
လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင်.ရှောက်မှု.၊ အလုပ်ချိန် စတဲ. အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင်.တွေအားလုံးဟာ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ. အသိဥာဏ်၊ ကိုယ်.အလုပ်သမားတွေ အပေါ် ထားတဲ. စေတနာပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ် စစ်ဆေးတဲ. အဖွဲ.အစည်းကလဲ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ။၊
ဆိုတဲ့အချက်ဟာ ကွက်တိမှန်ကန်နေပါတယ် …
ပြောရလျှင်လေ … နိုင်ငံခြားသားက သူတို့နိုင်ငံက ဥပဒေတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာမို့ … အလေးထားချင်လျှင်တောင် …. ကြားထဲက ငထွားခါးနာတဲ့ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားတွေရဲ့ အပေါ်ဖား အောက်ဖိလုပ်ရပ်တွေကြောင့် နည်းနည်းကွာဟချက်လေးတွေရှိလို့ ရေးပြရတာပါ ။ ဒီအချက်တွေက ကျွန်မအတွက် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုမျိုး မရှိသေးပေမယ့် … အခြေခံ အလုပ်သမား တစ်ချို့အပေါ် တိုက်ရိုက် သက်ရောက်နေတာကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြစ်မိလို့ ရေးမိတာပါ ။
ဒါတွေ.များများပြောဖို့ လိုတယ် ။
မဖြစ်စလောက် လစာငွေ လေး နဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ပါ ဆုံးရှုံး နေကြရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အလုပ် သမားထု အတွက် အစိုးရမှာ ကော လုပ်ငန်းရှင်တွေ မှာပါ အပြုသဘော နဲ့ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင် ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ် ။ တိုက်ရိုက် တာဝန် ပေးခံထားရ တဲ့ လူတွေ ကလည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာ ၊ အသိပေး ပီး မှဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေကြောင့် ဒါတွေဟာ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါ ။ သူတို့လည်း အဆီယစ် ချင်နေတော့ အလုပ်သမားထု ခံရတာပေါ့ဗျာ ! ဒီနေ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လယ်သမား နဲ့ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကို မအိတုံ ရဲ့ ပို့ ( စ ) ကနေ ထောက်ခံကြောင်း ကြေငြာလိုက်ပါတယ် ။ စကားမစပ်ဗျာ! ကိုဖိုးဖြူ တို့လို ခေတ်သစ် သူရဲကောင်း တွေကို လေးစားအားကျမိတယ်ဗျာ !
ကျုပ်အတွက်ကတော့ ဘာမှ သဘောထားကွဲလွဲစရာ တစ်ခုမှ မရှိတဲ့
အိတုန်ရဲ့ စေတနာအနှစ်တွေ ကို ဖတ်လိုက်ရတာပါ ။
ကော်လံဖြူ အလုပ်လုပ် နေသူ တစ်ယောက် ပေမဲ့ ကော်လံပြာ အလုပ် လုပ်နေသူ တွေ အတွက် ပါ စာနာ စဉ်းစားပြီး ပြောတဲ့ Post လေးကို လေးစား စွာ နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် တုန်တုန်ရေ။
ငါကောင်းရင်ပြီးရော စိတ် နဲ့ လူတွေ
အထက်ဖား အောက်ဖိ ပုံစံ နဲ့ လူတွေ
ကတော့ ဒါတွေဟာ မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရမှာ တွေ လို့ သိတောင် သိမယ် မဟုတ်ဘူး။
ဒီလိုမျိုး အသိ၊ အတွေး တွေ ကို ဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြန့်ပေးလာနိုင်ရင် တဖြေးဖြေး နဲ့ တော့ ကောင်းလာဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ :-)
ဒါတွေ များများပြောလျှင် .. ဒေါတွေ များများပါမှာစိုးလို့ … မေ့သလောက်ရှိမှပဲ တခါပြန်ထပြောဦးမယ်… အဟီးဟီး …..
ဒီနိုင်ငံမှာ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာကလည်း … အလုပ်သမား ခ သက်သာဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့်လည်းပါတော့…. သူများ နိုင်ငံတွေနဲ့ တန်းတူ အလုပ်လုပ်ရဦးတော့ …. နိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေးတန်းဖိုးနဲ့ အခြားသော အခြေနေတွေကြောင့် ….. လစာလယ်ဗယ်ချင်းတော့ တူမယ်မထင်ဘူး …. ။ အလုပ်သမားလစာ အနိမ့်မြင့်ကတော့ …. သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေမလားပဲ …. ။ ကိုယ်ကလည်း … အရည်ချင်း .. လုံလုံလောက်လောက်ရှိပြီး … မျက်နှာလွဲရတဲ့အနေထားမျိုးဆို … လိုသလောက် အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းလို့ ရပါတယ် …. ။ ဒီအလုပ်သမားက လုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုလျှင် .. အလိုလိုကို ..အလုပ်ရှင်ဘက်က လိုက်လျောလာပါလိမ့်မယ်လို့ .. ထင်ပါတယ် ……… ။ တချို့နေရာမျိုးတွေကြတော့.. အလုပ်သမားဘက်က အမှန်ကန် အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ပါလျှက် အလုပ်ရှင်က ငကန်းသွားလျှင် ငဆွေတော့လာမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ … အလုပ်သမားတွေကို လျစ်လျူရှုနေကြတယ် …. အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ ….. ကိုဖိုးဖြူတို့လို ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးသူတွေ လိုအပ်လာရော ……… ။ တကယ်နစ်နာရသူတွေအတွက်တော့ ….. မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့စည်းမျိုး ရှိသင့်ပါတယ် …. ။ ဒါ့အတူ .. အချောင်လိုချင်လို့လား .. တကယ်ပဲ နစ်နာသလားဆိုတာလည်း … အမှန်တိုင်း ခွဲခြားနိုင်ဖို့တော့ … လိုမှာပေါ့လေ … ။
ကိုပေရေ .. ကျွန်မနဲ့သဘောထားခြင်း မကွဲလွဲဘူးဆိုလို့ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ။
ဘယ်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ် လာလည်း ခဏပဲ … အပေါ်ယံလာစစ်ပြီး ပြန်သွားရုံနဲ့ မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေမို့ …… ရေးပြလိုက်တာပါ …. ။
ကော့မန့်ပေးဆွေးနွေးတာကို .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ။
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း .. အလုပ်သမားတွေ ဘ၀ကို ထပ်တူစာနာပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် …ပင်ပန်းကြီးစွာ ရှာစားနေရတာမြင်ရလျှင်ပဲ …. ရင်ထဲသိပ်မကောင်းသလိုပါပဲ … ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း …. အလုပ်ဖြင့် အဖြစ်ရှိအောင် မလုပ်ပဲ .. လောဘတက်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုမြင်တော့ … အလုပ်ရှင်ကို ကိုယ်ချင်းစာကာ …၊ စိတ်တိုပြီး စေတနာပျက်မိပြန်ရော …… ။ လူ့စိတ်ဆိုတာကလည်း ခက်သားလားနော် …. အခြေနေအရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး ….. ပူလိုက် အေးလိုက် လိုက်တုံ့ပြန်တာမျိုးပါ ….. ။ ဗလောင်းဗလဲတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ … ။
မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ …. အရေးပါမှုနဲ့ ပေါက်ရောက်မှု အတိုင်းတာကို …. တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကနေမြင်တွေ့ ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ ……….. အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဘက်ကနေ .. အော်သံ တစ်ခုထွက်တဲ့အနေနဲ့ …. သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကို …သိစေချင်လို့ ရေးလိုက်တာ .. ၀န်ခံပါတယ် … ။ တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ရင်း …. အလုပ်ရှင် ၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက်စလုံး ပိုကောင်းလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ ….
အရေး အကြီးဆုံးကတော့ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် လေးစားသမှုနဲ့အပေး အယူမျှဖို့ပါဘဲ ။
မပေးတာတွေကို ပေးအောင် တောင်းပြီးရင်လည်း တန်ဖိုးထားတတ်ကြဖို့လည်း ပြန်လိုပါတယ် ။
အိတုန်ရေ .. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော် ။ ကျွန်တော်လည်း အဲယားကွန်းခန်းမှာ ထမင်းကျွေးတဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ လုပ်ဘူးပါတယ် ။ ဟင်း သုံးမျိုး နဲ့ကျွေးပါတယ် အသားတစ်ခွက်၊ အရွက်တစ်ခွက် ၊ အရည်သောက်တခွက်နဲ့ပါ ။ အဲ့ဒါကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ကိုယ် ကုန်နိုင်သလောက်မထည့် ၊ ထည့်ချင်သလောက်ထည့်ပြီး သွန်ပြစ်တဲ့ သူက ခပ်များများပါ ။ ကိုယ့်အိမ်မှာတောင် ပုံမှန်စားနိုင်ချင်မှ စားနိုင်မှာ ။ ဒါကို ဟင်းမကောင်းဘူး ၊ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် နဲ့ ဂျီကျ ကြပါသေးတယ် ။
အချို့ ၀န်ထမ်းများ split shift ဆင်းရတဲ့ အတွက် အိမ်ပြန်ချိန်မရလို့ အိပ်ယာ လုပ်ပေးထားပါတယ် ။ သန့်ရှင်းရေး ၀န်ထမ်း မနိုင်နိုင်လောက်အောင် ညစ်ပါတ်ကြပါတယ် ။
ကိုယ့်ပစ္စည်းဆိုရင် ရိုသေသလောက် ကိုယ့်ပစ္စည်း မဟုတ်တော့ ပစ္စလက္ခ လုပ်ပြစ်ကြတာ ။
အဓိက ကတော့ အလုပ်ရှင် က လုပ်ပေးဖို့သင့်သလို လုပ်ပေးရင်လည်း ၀န်ထမ်းများက တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ် ။
အဲ့ဒီ့ နှစ်ပိုင်းလုံးမှာ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာတွေ အတော်အားနည်းနေပါသေးတယ် ။
ပထမဆုံးပြောခချင်တာတော့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပို့ စ်လေးပါ ။ နောက်ထပ်လည်းအလုပ်သမား တွေရဲ့ 
လူမသိတဲ့ အခက်အခဲတွေလဲ ရေးစေချင်သေးတယ်။ နောက်င်္ပြီး ကိုထူးဆန်းပြောသလို သူတို့ ရဲ့ စိတ်ဓတ်တွေကို
ဘယ်လိုပြုပြင်နိုင်မလဲပေါ့။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမှီသဟဲပြုရတာတော့ အမှန်ဘဲ
လုပ်ငန်းပေါက်စတွေမှာလဲ ဒါမျိုးတွေ ရှိနေတတ်တာပါဘဲ ။ (ဒါနဲ့  စတိုင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလားလို့)
အလေးထား ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …
ကိုထူးဆန်းပြောတာလည်း ဟုတ်ပါတယ် …… နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လေးစားသမှုနဲ့ အပေးယူမျှမှုကလည်း အရေးကြီးတာပေါ့လေ … ။
အလုပ်ရှင်ကလိုက်လျောပေးပေမယ့် …. ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စား ၀န်ထမ်းတွေရှိတတ်တော့ …. အလေလွင့်ဖြစ်ကုန်ရတာတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ် …. ။ ကိုထူးဆန်းပြောတဲ့ အကြောင်းရာက .. အလုပ်ရှင်က ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပေမယ့် .. အလုပ်သမားတွေ အသုံးမကျလို့ ….. စေတနာပျက်ရတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့ …. ။ ဒါပေမယ့်လေ ….. အလုပ်သမားအသုံးမကျလို့ အလေလွင့် ဖြစ်ရမှာကိုတွေးပြီး … အစကတည်းက .. မထောက်ပံ့ ၊ မဖြည့်ဆည်းပေးထားတာမျိုးတော့ … မဖြစ်သင်ဘူးပဲ …… ။ ဥပမာပေးရလျှင်လေ … ဒီနေ့ရေချိုးလည်း .. နောက်နေ့ထပ်ချိုးရဦးမယ် … နောက်လလည်း … ထပ်ချိုးရဦးမှာမို့ …. (မထူးတာမို့) …. ရေကုန်သက်သာအောင် … တစ်လနေမှ တခါလောက်ချိုးမယ်ဆိုတာမျိုး လိုပေါ့ ……. ။ တကယ်ဆို .. ဒီနေ့ ချိုးတာ ဒီနေ့ လန်းဆန်းဖို့ ၊ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းဖို့အတွက်ပါ ။ နောက်နေ့ ထပ်ချိုးတော့လည်း …. ဒီလို ခံစားမှုမျိုးပါပဲ ….. ။ ဒီနေ့ရေချိုးလိုက်လို့ .. နောက်နေ့ နေမကောင်းဖြစ်လျှင်တော့ .. ရေချိုးခြင်းကို ခဏရပ်ထားရတော့မယ်ပေါ့ … ။
ဆိုလိုတာကလေ ….. အလုပ်သမား အသုံးကျတာ .. မကျတာက … နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းပါ … ။ အလုပ်ရှင်ဘက်က …. စည်းမျဉ်း .. ဥပဒေအတိုင်း … လက်တလုံးခြားမလုပ်ပဲ အရင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေသင့်တာပါ ။ ပြီးမှသာ … ကိုယ်ပံ့ပိုးသလောက် မတန်လျှင် …. ပံ့ပိုးမှုကို လျော့ချတာမျိုး … ရုတ်သိမ်းတာမျိုး ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ် … ။ အဲ့ဒီအခါ ဌာနဆိုင်ရာဘက်က တစ်ခုခု ဘိုင်ဖို့စ်ပေးတာမျိုး … ကွန်ပလိန်းတက်လာတာမျိုးရှိလျှင်လည်း … ပံ့ပိုးမှု အပြည့်ဝ ဘာကြောင့်မပေးသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုး အလုပ်ရှင်ဘက်က ကောင်းကောင်း ပေးလို့ ရတဲ့ အနေထားမို့ပါ ။
ကော့မန့်ပေး ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော် …. ။
အလုပ်သမားတွေဘက်ကနေ …. နောက်တစ်ခုရေးစရာလေးလည်း ကျန်ပါသေးတယ် …..အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက ပြဌာန်းချက်စာအုပ်ကို …. အစဆုံး ပြန်ဖတ်နေတုန်းမို့ပါ …. ။ အဲ့ဒါကတော့ … ခွင့်ခံစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ အကြောင်းပါ …. ။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြင်ဖို့ ….. သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်အသိဥာဏ်အပြင် ၊ ကျေးဇူး သိတတ်မှု ၊ အလုပ်ရှင်ရဲ့ … မြှောက်စားမှုတွေနဲ့ .. အများဆုံးသက်ဆိုင်မယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ထင်ပါတယ် …. ။ အဓိကကတော့ စိတ်ဓါတ်ပေါ့နော် ….. တာဝန်သိစိတ်နဲ့ ကျေးဇူးတရားကိုသာ .. ယှဉ်ပြီးရိုက်သွင်းပေးကြည့် ….. အလုပ်သမားတစ်ယောက်က .. မိမိရဲ့ အလုပ်ချိန်မှာ … တာဝန်လစ်ဟင်းမှု ၊ အချောင်ခိုလိုမှုထက် …. အလုပ်ကိုပြောင်မြောက်စွာ ပြီးစီးစေမှုတို့နဲ့ …. အလုပ်ရှင်ရဲ့ .. မြှောက်စားမှုကို ခံယူလိုစိတ်တို့နဲ့ …. သူ့အလုပ်သူ …. ပင်ကိုယ်အသိနဲ့ကို လုပ်တတ်သွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ……… ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း … အဲ့ဒီအချိန်မျိုး ကျော်ဖြတ်ဖူးတာမို့ပါ ။
ဘယ်သူကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ်ကအရင်ကောင်းပြရမှာပေါ့ 
နားလည်မှုဆိုတာအပြန်အလှန်ပေါ့နားလည်မှုမရှိသူကျတော့ လည်း
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ နေခဲ့ ပေါ့ ။ ဒီခေတ်မှာ ဝန်ထမ်းကောင်းရှားသလို အလုပ်ရှင်ကောင်းလဲ
အတော်ရှားပါတယ် ။ အပေးအယူမမျှသေးဘူးထင်တာဘဲ ။ ကျွန်တော်တို့ လဲ ဒါမျိုးခတ်ဆင်ဆင်ကြုံရပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဆာမိရယ် ….
အလုပ်ရှင်ကောင်းနဲ့ … ၀န်ထမ်းကောင်းနဲ့ အကျိုးကြောင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ မတွေ့ကြသေးဘူးပဲ ထင်ပါတယ် … ။
စကားမစပ် အတင်းစပ်ပြီး … ပြောရလျှင် … ဘော်ဒါတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ပျက်လေးပေါ့နော် … ။
သူ့ခမျာ … ဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက် .. အစစအရာရာ … လူခေါ်တာကအစ လိုလေသေးမရှိလိုက်လုပ်ပေးပြီး …. အလုပ်သွင်းပေးထားတာ ….. သိပ်မကြာခင် တခြားပြိုင်ဘက် ကုမ္ပဏီက … လစာအများကြီးပေးပြီး သူ့ကို စည်းရုံးလေရော … သူလည်း … အခုအလုပ်မှာ ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီး … မထွက်ရော…. သူနဲ့ အတူလုပ်နေတဲ့ လူတွေ ၊ တခြား အလုပ်သမားတွေကို … လစာ နှစ်ဆပေးပြီး …စည်းရုံးလိုက်တာ …. အားလုံးအလျှိုလျှိုထွက်ကုန်ကြပါရောလား ….. ။
လူတွေက … တစ်ခါတလေကျတော့လည်း နားလည်ရခက်သား …… အလုပ်မရှိတုန်းက … ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးပြုခဲ့တာတောင် သစ္စာ မစောင့်သိပဲ ….. ခြံခုန်ချင်ကြတယ် …. ။
အစစအရာရာ ကူညီပေးပြီး အလုပ်သွင်းပေးခဲ့တဲ့လူ …. ၊ မက်လုံးတွေပေးပြီး စည်းရုံးတာတောင် … သူထွက်သွားလျှင် … တခြား အလုပ်သမားတွေအတွက် အကာကွယ်မပေးနိုင်မှာစိုးလို့ ဆိုပြီး … မထွက်ခဲ့ဘူး… ကဲ ……. အခုတော့ … အလုပ်သမားတွေ အတော်များများ လစာနှစ်ဆနောက်ခြံခုန်သွားကြပြီ ……… ဟို ကြားထဲက … ကူညီခဲ့တဲ့ လူကြီး … အခုဆို … ရင်ကွဲပက်လက်နဲ့ … ဟက်ထိနေရပြီလေ ……. ။
တစ်ချို့စက်ရုံတွေမှာရေသန့်စက်ထားပေးဖို့နေနေ ရေသန့်ဘူးဖိုးတောင် တစ်ရက်ကို ဘယ်နှစ်ဗူးဖိုးဘဲ ထုတ်ပေးမယ် ပိုရင်စီမံဝန်ထမ်းကစိုက်လျော်ဆိုတော့ ရေသန့်ဘူး အပြည့်မထောက်ပံနိုင်လို့ ရေအိုးလေးတွေရှိနေစဲပါ။
ဖျားနာလို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ထက် ပျက်ရက်များရင် မကြည်ချင်တဲ့ အလုပ်ရှင်ကပိုများသဗျ။
အဲဒီအလုပ်ရှင်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင် လူအခွင့်အရေးကိုရှေ့တန်းတင်နေတဲ့ အိုင်အလ်အိုလို အလုပ်သမားခံစားခွင့်က ဘယ်လိုရှိရမယ်ဆိုတာတွေကို ပြောဆိုနေကြ တဲ့နိုင်ငံတွေက ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေလည်းပါပေမယ့် မသိချင်ယောင် ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေကြတာခပ်များများပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်မှာတော့ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ရတာ ဘယ်လိုကောင်းတာကို လွမ်းမနေနိုင်ဘဲ အလုပ်သမားအများစုဟာ လွမ်းရေးထက် ၀မ်းရေးခက်မို့ ကျိတ်မှိတ်၍သာလုပ်ငန်းခွင်ကို ၀င်နေကြသူများပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးလိုက်ပါရစေ မအိတုံရေ။
ဆက်ပွားလိုက်ဦးမယ် etone ရေ ။
ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာ အရင်က စာပေးစာယူ သမားတွေ ရှိ ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့ စာမေးပွဲ လကလည်း ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အများဆုံးအချိန်တွေမှာ တိုက်ဆိုင်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပညာရေး ၊ သူတို့ အဆင့်မြင့်ရင် ကိုယ့်ကုမ္မဏီလဲမြင့်လာမှာဘဲဆိုပြီး အလွန် အလုပ်များတဲ့ အချိန်မှာရနိင်သလောက်လူခွဲပြီး ခွင့်ပြုခဲ့တယ် ။
အချို့သော သင်တန်းတွေ တက်ချင်ရင်လည်း တက်ပါ ဆိုပြီး အလုပ်တက်ရမဲ့ အချိန် နောက်ကျခွင့်ပြုပြီး တက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ် ။
အဲ အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အခြားက လစာမြှင့်ပေးပြီး လဲခေါ်ရော ၊ ဘိုင်ဘိုင့်လုပ် လုပ်သွားကြတော့ အခုတော့ သင်တန်းတက်ချင်လား ။ ရတယ် ။ ထွက်ပြီးတော့ တက်တော့ ။ စာပေးစာယူ တက်နေလား ။ ရတယ် ။ တစ်ခြားမှာ အလုပ်သွားရှာတော့ ။
ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ စာပေးစာယူ မတက်တော့ပါဘူး ။ အလုပ်သာ လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ အလုပ်ခန့်ပါ ဆိုလို့ ခန့်လိုက်ပါတယ် ။ စာမေးပွဲ ချိန်လည်း ရောက်ရော အိမ်ကပြောလို့ ၊ အမေက အတင်းပြန်တက်ခိုင်းလို့ ထွက်တော့မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတော့တယ် ။
ဒါနဲ့ ဘဲ သူု့ ကိုယ်မယုံ ကိုယ့်သူ မယုံ နဲ့ရင်လေးစရာကောင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ပြဿနာ တစ်ခုပါဘဲ။
အိမ်သာ သော့ခတ်ထားလို့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတဲ့ အကြိမ်မနည်းပါဘူး။
သော့ခတ်တာကို အပြစ်တော့မမြင်မိပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ညစ်ပတ်သူမဟုတ်လေ
တော့ အတော့်ကိုခံစားရခက်ပါတယ် မမအိတုံရေ။
အီးဒုံးဂျီး မကျေနပ်ရင် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကွာ။ အန်ကယ်ဂျီးတို့မှာက စက်ရုံစားရိတ်အပြင် သမီးလေးတွေအတွက်လည်း အိမ်ကမိန်းမဂျီးမသိအောင် ရှာရဖွေရသေးဒယ်။ :cool:
တရားဝင် ဖိတ်စာပို့ပါတယ် (စာပို့သမားမအားလို့ နောက်ကျတာခွင့်လွှတ်ပါ)
အမှန်တော့ အမွှာလေးတွေနဲ့တောင် ရောက်လာပြီးသားပဲနော်။
အန်တီရေ ဖိတ်စာ လာပို့တာကျေးဇူးပါ
ဟိုအမွှာနှစ်ကောင်ကဲတာ လိုက်ထိန်းနေရလို့ အစဆုံးတောင်သေချာမကြည့်လိုက်ရဘူး။ စလိုင်းပျက်မှာ တစ်ခါ ပြန်လာမှ ထပ်ကြည့်ရတော့မယ် .